I-ProOpinion: Joyina Umphakathi Webhizinisi Oqhutshwa Ucwaningo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 25, 2015 ISonto, Ephreli 26, 2015 Douglas Karr
Olunye ushintsho esilubonayo kuwebhu ukuthi izingosi zamahhala nezama-freemium ziyaqhubeka nokulwa nekhwalithi yokuqukethwe kwazo nokunemba kwemininingwane ezikhiqizayo. Uma kukhulunywa ngezinqumo zokumaketha, siyaqhubeka nokubona ukuthi indlela ehambisanayo ikhiqiza imiphumela emihle kakhulu. Kubalulekile ukuthi abeluleki noma abathengisi bafunde amasiko, izinsizakusebenza, nezinhloso zebhizinisi ngaphambi kokwenza izincomo zamasu noma ipulatifomu. Usayizi owodwa awulingani konke.
IProOpinion inikela ngokuqukethwe okuyingqayizivele, okunikwe amandla ocwaningo, okungatholakali kwenye indawo ngoba iProOpinion ingumthombo wocwaningo. Okuqukethwe kuningi, kufinyeleleka kalula, futhi okubaluleke kakhulu, kunengqondo.
Amalungu eProOpinion azinikele enqubekweni, azibophezele ngokugcwele ekuvuseni ubuchule, futhi ayaphikelela ekuphishekeleni izwe lebhizinisi elingcono. Ezinkampanini emhlabeni wonke, impendulo evela kubantu abasebenzisa imikhiqizo nezinsizakalo zabo ibaluleke kakhulu lapho izama ukugcina izimbangi kusibuko sabo sangemuva sokubuka. I-ProOpinion ivumela amalungu ukuthi athonye imikhiqizo nezinsizakalo zesikhathi esizayo ngokwabelana ngemibono ocwaningweni oluku-inthanethi.
IProOpinion ikhululekile ukujoyina kepha amalungu angathola okuthile okuncane ngenkathi futhi enza ngcono indawo yemakethe. Eminye imivuzo ethandwayo etholakele ifaka phakathi ama-Amazon.com Gift Cards nama-iTunes Gift Cards. Unganikela nangomholo wakho kwi-American Red Cross. Izimemo zeSurvey zithunyelwa nge-imeyili kumalungu noma zingangena ngemvume ku-akhawunti yazo ku-proopinion.com ukuze zibambe iqhaza kuzinhlolovo ezenziwa online.
Usesho lwakho locwaningo olubalulekile kuwe lima lapha - joyina I-ProOpinion namuhla.
Le yingxoxo exhasiwe ebhalwe yimina ngimele iProOpinion.
Tags: umphakathi wamabhizinisiucwaningo lwebhizinisiumbonoumphakathi wokucwaninga